बैसाख ३० गते नेपाली आकाशमा देखिने छ धूमकेतु, ज्योतिषले भने यो धूमकेतुले राम्रो फल दिने छ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बैसाख ३० गते नेपाली आकाशमा देखिने छ धूमकेतु, ज्योतिषले भने यो धूमकेतुले राम्रो फल दिने छ !
यो साता (विसं २०७७ वैशाख अन्तिम साता) नेपालबाट एउटा धूमकेतु (पुच्छ«ेतारा) देखिइरहेको खगोलविद्ले जनाएका छन् । खगोलविद्ले यो धूमकेतुको नाम २०२० स्वान पुच्छ«ेतारा राखेका छन् । यो धूमकेतु नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सकिने वाल्मीकि विद्यापीठ ज्योतिष विषयका सहप्राध्यापक एवं वरिष्ठ खगोलविद् जयन्त आचार्यले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
नेपालबाट बिहानको समयमा उत्तरपूर्वी आकाशमा मीन राशिमा पुच्छ«ेतारा देखिने छ । यो पुच्छ«ेतारा वैशाख ३० गते मङ्गलबार पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक हुनेछ । पूर्वी क्षितिजभन्दा केही माथिमात्र देखिने भएकाले यसलाई हेर्न अलि कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । गत चैतमा पत्ता लागेको यो पुच्छ«ेताराको चमकपन ३.५ म्याग्निच्युड हुने जनाइएको छ ।
क्षितिजबाट यो धूमकेतु १५–२० डिग्रीमाथि सूर्योदय हुनुभन्दा केही समयअघिमात्र देखिने भएकाले हेर्न गाह्रो हुनसक्ने जनाइएको छ । सानो खालको बाइनाकुलर अथवा टेलिस्कोपको सहायताले भने यसलाई स्पष्ट रुपमा देख्न सकिने खगोलविद् आचार्यले बताउनुभयो ।
धूमकेतु देखिँदा विवाह, व्रतबन्ध, राज्याभिषेक, चूडाकर्म, गृहप्रवेश आदि शुभकार्य गर्नुहुँदैन भनी ‘मुहूर्त चिन्तामणि’ नामक ज्योतिष ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा वैज्ञानिकरूपमा हालसम्म कुनै पुष्टि भने नभएको उहाँले बताउनुभयो । यो धूमकेतु उत्तरपूर्वमा देखिने छ । शास्त्रमा उत्तरतिर देखिने धूमकेतुको फल राम्रो भनी व्याख्या गरिएको छ । दक्षिणतिर देखिने धूमकेतुको फल नराम्रो मानिएको छ । यसपटक उत्तरपूर्वमा धूमकेतु देखिने भएकाले राम्रो फल दिने जनाइएको छ ।
भद्रकालीस्थित आर्मीको पेट्रोल पम्पमा ड्युटीमा रहेको नेपाली सेनाका सिपाहीले आफुले आफैलाई गो’ली हानेर गरे आ’त्मह’त्या